Things that go 'Boom!' ~ ပေကယ်ဆယ်ရေး Firecrackers - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga
သငျသညျပေကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်အများဆုံးနေရာလေးကို tools တွေနဲ့တ Firecracker ဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ညာဘက်ကိုကြည့်လျှင်သင်လိုအပ်ချက်အချက်များနှင့်အတူတိုက်ကျွေးခံရဖို့တစ်နည်းနည်းမီတာတှေ့လိမျ့မညျ, အဆိုပါပေါင်းစပ်ဟာပိုကောင်းပိုကြီး. အုတ်များနှင့်အနည်းငယ် firecracker ပေါ်လာရှင်းလင်းရေးဖွငျ့ဤမီတာဖြည့်ပါ, ဒီနည်းနည်းကျောက်မျက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည်, ရိုးရှင်းစွာသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖို့လိုအပ်ကော်လံမှာထောက်ပြ (ပယ်ခံနေရခံရဖို့အကြောင်းကိုထိပ်ပေါ်မှာမင်မျက်လုံးခွေးကလေးနှင့်အတူတစျခုနဲ့တူ) နှင့်မည်သည့်သတ္တုသေတ္တာများသို့မဟုတ်ဖန်ဖြစ်ပွားမှုအပါအဝင်ဒီကော်လံ caged သို့မဟုတ်သော့ခတ်အုတ်များအတွက် destroyed..except ဖွစျလိမျ့မညျ, သူတို့ပထမဦးဆုံးအသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်.
သင်ကမှန်ကန်တဲ့ကော်လံနှင့်သင်၏ cracker align နှင့်မီးအစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်ရွေးနိုင်သည်!
သတငျးကောငျးကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပင်ဖြစ်သည်ပုံမီးရှူးမီးပန်းများကိုချစ်နှင့်အတော်လေးပျော်ရွှင်စွာပေါက်ကွဲမှုမှတဆင့် bounce နှင့်အောက်ခြေမှပယ် scurry (*ဒီကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌လျှောက်ထားပါဘူးမှတ်ထားပါ, အများဆုံးခွေးပြင်းထန်များမှာ pyrotechnophobes!). မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်သည်ဤ firecrackers ဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့် သိ. သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အခါသူတို့ကိုဆွဲထားဖို့လာသောအခါဖြစ်ကောင်းဒီဂိမ်းရဲ့အဓိကကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်!
ဒါကြောင့်ပုံပေါ်သကဲ့သို့သင်တို့မကြာမီအဖြစ်သင့် Firecracker ကိုသုံးပါရန်ရှိသည် dont, ယင်း၏ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားပေမယ့်ကိုယ့်သင်သာတစ်ကြိမ်ရှိသည်နိုင်ဆိုတာကိုသတိရမရ, သငျသညျဝင်ငွေမဆိုထပ်မံအချက်များမီတာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့မည်မဟုတ်ပါ. ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကိုချွတ်သတ်မှတ်ပြီးပါပြီတစ်ချိန်ကသင်သာအခြား cracker ဝင်ငွေစတင်နိုင်ပါသည်. သောကြောင့်ငါ၏အ crackers ချွတ်ထားမှနဲ့တူဒီငါသူတို့ပေါ်လာအဖြစ်. သင်တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိပါကမြေကြီးတပြင်သို့မဟုတ်ပိုက်တစ်ထစ်အပေါ်ကိုစို့သငျသညျက၎င်း၏ဘယ်ဖက်မှကော်လံတက်တဲ့ firecracker အားမရသဖြင့်သူ့ကိုပယ်ဝင်တိုးနိုင်ပါတယ် (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များညာဘက်ကျဆုံးခြင်း dont အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုမမေးမနေပါနဲ့!)
တစ်ဦး cracker ချွတ်ချိန်ညှိခြင်းရိုးရှင်းစွာအစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနှင့်ကမှပေါ်တွဲလွဲဆွဲထားချင်လျှင်သို့မဟုတ်မယ့်အနီရောင် 'X' hit. အဆိုပါလုပ်ကွက်အမြဲဖြောင့်ပြပ် dont ကိုသတိပြုပါ, သူတို့ကအာကာသသို့တစ်ခုထဲဖြစ်သွားဖို့စိတ်သဘောထားရှိသည်, သငျသညျအခြို့သောကြီးတွေပေါင်းစပ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကြိုးစားနေလျှင်မကြာခဏသင့်ရဲ့ groove လုယူနိုငျသော. လုပ်ကွက်နေရာဖြည့်ဖို့သူတို့ကိုအထက်ဘာမျှမနှင့်အတူဘုတ်၏အောက်ခြေတွင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကျော် scoot (နောက်တဖန်လက်ဝဲမှ) နှင့်အခြားကျန်ရှိနေသေးသောလုပ်ကွက်အတူတက် join . ဒါဟာသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လမ်းထဲကလုပ်ကွက်တစ်အချို့သောရာခိုင်နှုန်းကိုရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်ဖို့အလွန်အသုံးဖြစ်ပါသည်.